28 Bere a yekoduu dwoodwoo no, ɛno na yehui sɛ wɔfrɛ supɔw no Malta.+ 2 Na nnipa a wɔka ananakasa no daa yɔnkodɔ+ soronko adi kyerɛɛ yɛn, na osu a na ɛretɔ ne awɔw+ a ɛwom nti, wɔsɔɔ ogya gyee yɛn nyinaa kama. 3 Nanso bere a Paulo boaboaa mmabaa bi ano de guu ogya no so no, ɔhyew no maa ahurutoa bi fii mu bɛbobaree ne nsa ho. 4 Bere a nnipa a wɔka ananakasa no ani bɔɔ aboa no so sɛ ɔsɛn ne nsa ho no, wɔka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Akyinnye biara nni ho sɛ onipa yi yɛ owudifo, na ɛwom sɛ wafi po no mu afi dwoodwoo de, nanso esiane sɛ bɔne so wɔ akatua nti, ɛremma sɛ obenya ne ti adidi mu.” 5 Nanso, ɔpetee aboa bɔne no too ogya no mu a hwee anyɛ no.+ 6 Nanso na wɔhwɛ kwan sɛ ɔrebɛhonhon anaasɛ ɔrebetwa ahwe awu amonom hɔ ara. Bere a wɔtwɛn bere tenten a wɔanhu sɛ bɔne bi ato no no, wɔsesaa wɔn adwene fii ase kae sɛ ɔyɛ onyame.+ 7 Afei na supɔw no so okunini a wɔfrɛ no Publio no wɔ nsase wɔ mpɔtam hɔ; na ogyee yɛn fɛw so de nnansa som yɛn hɔho kama. 8 Nanso ɛbae sɛ na Publio papa da hɔ a atiridii ne konkoruwa akyere no, na Paulo kɔɔ ne nkyɛn kɔbɔɔ mpae de ne nsa+ guu no so saa no yare.+ 9 Eyi sii akyi no, supɔw no so nnipa a aka a wɔwɔ nyarewa nso fii ase baa ne nkyɛn ma ɔsaa wɔn yare.+ 10 Na wɔn nso de akyɛde pii dii yɛn ni, na bere a yɛrefi hɔ akɔ no, wɔmaa yɛn nneɛma pii a ɛho behia yɛn. 11 Asram abiɛsa akyi no, yɛforoo hyɛn bi a n’agyiraehyɛde ne “Seu Mma” a efi Aleksandria+ a awɔw bere too no supɔw no so no. 12 Na yekogyinaa Sirakusa dii hɔ nnansa, 13 ɛhɔ na yefi kõa kosii Regio. Na da a edi hɔ no, anafo mframa bi bɔe, na ne nnanu so no yekoduu Puteoli. 14 Yehuu anuanom wɔ hɔ, na wɔsrɛɛ yɛn sɛ yɛntena wɔn nkyɛn nnanson; eyi nyinaa na yɛn ani kyerɛ Roma. 15 Na anuanom tee yɛn nka no, wofi hɔ behyiaa yɛn wɔ Apia Gua so ne Nsadan-Mmiɛnsa tɔnn, na Paulo ani bɔɔ wɔn so pɛ na ɔdaa Onyankopɔn ase na otwaa ne koma too ne yam.+ 16 Afei, bere a yɛkɔɔ Roma no, wɔmaa Paulo kwan+ ma ne nkutoo kɔtenae, na na ɔsraani a ɔwɛn no ka no ho. 17 Nanso, nnansa akyi no, ɔfrɛɛ Yudafo no mu atitiriw no hyiae. Bere a wohyiae no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, anuanom, ɛwom sɛ menyɛɛ biribiara a etia ɔmanfo anaa yɛn agyanom amanne+ de, nanso wɔde me hyɛɛ Romafo nsa sɛ ɔdeduani wɔ Yerusalem.+ 18 Na bere a wɔhwehwɛɛ asɛm no mu wiei+ no, na wɔpɛ sɛ wogyaa me+ efisɛ na menyɛɛ hwee a ɛsɛ owu.+ 19 Na bere a Yudafo no kɔɔ so kasa tiae no, ɛhyɛɛ me ma mede asɛm no kɔdan+ Kaesare, na ɛnyɛ sɛ ebia mewɔ biribi a mede rebɔ me man sobo. 20 Nokwarem no, asɛm yi ho nti na mesrɛe sɛ mepɛ sɛ mihu mo ne mo kasa, efisɛ Israel anidaso+ nti na wɔagu me nkɔnsɔnkɔnsɔn yi.”+ 21 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yennyaa wo ho krataa biara mfii Yudea, na anuanom a wɔaba no mu biara mmɛbɔɔ amanneɛ anaasɛ wɔmmɛkaa wo ho asɛmmɔne biara. 22 Nanso yesusuw sɛ ɛyɛ papa sɛ yebetie w’adwene efisɛ nokwasɛm ni, yenim sɛ fekuw+ yi de, wɔkasa tia wɔ baabiara.”+ 23 Afei wɔhyɛɛ da a wobehyia, na nnipa pii baa baabi a ɔte no. Na ɔkyerɛkyerɛɛ asɛm no mu kyerɛɛ wɔn dii Onyankopɔn ahenni ho adanse+ fefeefe, na ɔnam Mose+ mmara ne Adiyifo+ no so kaa Yesu ho nsɛm a ɛtɔ asom, fi anɔpa kosi anwummere. 24 Na ebinom gyee nea ɔkae no dii;+ ebinom nso annye anni.+ 25 Na esiane sɛ na wɔn adwene nhyia nti, wofii ase sɛ wɔrekɔ, na Paulo de asɛm yi kaa ho sɛ: “Honhom kronkron faa odiyifo Yesaia so kaa no yiye kyerɛɛ mo agyanom 26 sɛ, ‘Kɔ na kɔka kyerɛ ɔman yi sɛ: “Ɔte de, mobɛte nanso morente ase; na ɔhwɛ de, mobɛhwɛ nanso morenhu.+ 27 Efisɛ ɔman yi koma apirim, na wɔde wɔn aso tie kwa, na wɔakata wɔn ani; na wɔamfa wɔn aniwa anhu amfa wɔn aso antie na wɔamfa wɔn koma ante ase na wɔansakra amma mansa wɔn yare.”’+ 28 Enti munhu sɛ wɔasoma nea Onyankopɔn nam so gye nkwa no kɔ amanaman mu;+ na ɔkwan biara so, wobetie.”+ 29 —— 30 Enti odii mfe abien kusuu wɔ ofie a n’ankasa agye tua ho ka mu,+ na ogyee wɔn a wɔba ne nkyɛn nyinaa fɛw so, 31 na ɔkaa Onyankopɔn ahenni ho asɛm de nnamyɛ+ kɛse kyerɛkyerɛɛ wɔn Awurade Yesu Kristo ho ade a biribiara ansiw ho kwan.